Ndi ama odomo elu definition egwuregwu na gị smart ntị? Ọ bụrụ na ị bụ onye na gamer na chọrọ na-enweta ndị kacha ụtọ nke Ịgba Cha Cha na gị smart ekwentị na mbadamba, mgbe ahụ, ndị a elu definition egwuregwu na-a zuru okè oke maka gị! Ndị a HD egwuregwu na-dị iche iche Genres na-enweta ike ngwa ngwa atụgharị gị mbadamba nkume ma ọ smart ekwentị n'ime a Ịgba Cha Cha ojii.
Ebe a bụ obere ndepụta nke kasị mma HD egwuregwu dị maka android na 2015 na dị oké ọnụ ahịa a ogbugba!
Asphalt 8 bụ kacha ụgbọala racing egwuregwu dị na elu definition n'ihi na gị android smart igwe na mbadamba. Nke kacha mma mma ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda ka racing ọzọ kwesịrị karịa mgbe ọ bụla! Vehicles site na ụfọdụ nke top manufactures dị ka Ferrari ịgbakwunye ise kpakpando a kediegwu egwuregwu.
2.FIFA 14 Site EA Sports
Ị n'anya football? FIFA 14 site EA Sports bụ ezi obi ụtọ maka ihe niile football hụrụ si n'ebe! Ị bụ free ịhọrọ gị otu, mmezi ha na-emeri dị iche iche na usoro. Egwuregwu a e mepụtara site ukara EA Sports mmepe, nke pụtara e nweghị ọzọ football egwuregwu ọzọ ezigbo karịa nke a otu!
3.Blood na Otuto
Akụkọ Mgbe Ochie: Ọbara na Otuto bụ a pụrụ iche na-alụ ọgụ egwuregwu melite na Roman oge. Na ọtụtụ ugbo ala ma na-akpọ ụdịdị, a HD ọgụ egwuregwu bụ nke zuru okè otu maka gị smart ekwentị. Ihe niile ị chọrọ ime bụ, gaa na njikọ nyere ebe a na ibudata a egwuregwu n'ihi na free.
4.Dead ịkpalite 2
Nwụrụ anwụ ịkpalite bụ nke abụọ version nke mbụ egwuregwu. Ọ bụ a elu klas égbè egwuregwu ebe ị na-azọrọ na igbu ndị na-eru nso zombies iji chebe onwe gị. Iche iche iche iche nke ngwá agha na elu definition ndịna-emeputa welie ọrụ ahụmahụ ma na-ọkpụkpọ ka a dum n'ụwa ọhụrụ.
Ị chọrọ amaba n'ime nke a fantasy ụwa? Nke a rụsiri egwuregwu na-eduga ná akparaghị ókè fun na njem ebe ị nwere ohere ngwangwa ka na-akparaghị ókè ngwá agha. Ị nwere ike ma na-egwu solo ma ọ bụ na-agba ndị enyi gị na-egwu na gị! Egwuregwu bụ kpam kpam free iji wụnye na gị smart igwe ma ọ bụ mbadamba.
Ị na-ama dị ka Real Racing Ịgba Cha Cha usoro? Real Racing nwere ugbua a ọnụ ọgụgụ nke Fans onye mgbe nile na-atụ anya maka ha ọhụrụ version. Nke atọ nsụgharị nke a Ịgba Cha Cha usoro esesịn e ulo oru na play echere free.
A ọzọ zombie egwuregwu na ndepụta a, Nwụrụ Anwụ Mmetụta awade ya Player na kasịnụ obi ụtọ na adrenaline rosh agbapụ ndị zombies. Ọkpụkpọ nwere gbaa ndị zombies na-ahụkwa ihe kpatara ọrịa.
Otu rụsiri N'ọgbụgba égbè egwuregwu, ihu Line Commando 2 na-ekwe nkwa ya Player na ihe enwekwukwa Ịgba Cha Cha ahụmahụ oge a. Na ọtụtụ ọhụrụ etoju ma na ego etoju, egwuregwu obụrede mbụre nke ma ya ibé na-emeputa.
9.SHADOWGUN: Nwụrụ Anwụ Mpaghara
Nke a na elu definition egwuregwu n'ihi na android jupụtara edinam. Na multi ọkpụkpọ atụmatụ na elu mkpebi ndịna-emeputa, agbọpụta egbe bụ kacha oke maka ọ bụla edinam n'anya. Nke a bụ egwuregwu dị maka download si android play ụlọ ahịa.
Were gị ụgbọala na see ụzọ chọpụta ndị iro gị na-alụ ọgụ ha! Na nke kacha mma ugbo ala, na ngwá agha, ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda, ihe-apụghị ibibi ebibi bụ maa egwuregwu ị mgbe a na-eche.
Top 10 Puzzle Games maka Android
Best Zoro Object Games maka Android
> Resource> emulator> Top 10 HD Games maka Android na 2015